‘भ्यालेन्टाइन डे’ स्पेशल : रिसाएकी गर्लफ्रेन्डलाई यसरी सजिलैं फकाउनुहो्स् ! « The News Nepal
‘भ्यालेन्टाइन डे’ स्पेशल : रिसाएकी गर्लफ्रेन्डलाई यसरी सजिलैं फकाउनुहो्स् !
काठमाडौँ । अहिले नेपालमा प्रणय दिवसको चर्चा भइहरेको छ । आज रोज डे अर्थात गुलाबको फुल दिने दिन । प्रेम दिवसको मुखैंमा तपाईको साथि रिसाइन भने त्यो तपाईका लागि त्यती फलदायक हुँदैंन । त्यसैंले आज हामी तपाईको यो समस्यालाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं । सर्च इन्जिन गूगलमा ‘गर्लफ्रेन्डसँग कसरी माफी माग्ने’ भनेर खोज्यो भने साढे तीन करोडभन्दा बढी उत्तर पाउन सकिन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा एक युवकले आफ्नो शहरमा तीन सय होर्डिङ बोर्ड लगाएर प्रेमिकासँग माफी मागे, थाहा छैन उनले कसैलाई पढेका थिए कि थिएनन् ।
महाराष्ट्रको पुणे जिल्लामा एक जना २५ वर्षीय युवकले ‘शिवडे, आई एम सरी’ लेखेर होर्डिङ बोर्ड लगाएका थिए । ती युवकले जसरी भए पनि आफ्नी प्रेमिकालाई आफ्नो कुरा सुनाउन चाहन्थे । उनलाई आफ्नी प्रेमिकाको नाम वा उपनामा(शिवडे)लेखेर बोर्ड राख्दा युवतीको पहिचान खुल्ने हुँदा त्यसले पछि केही समस्या आउला कि भन्नेमा भने ध्यान पुर्याएनन् । हुनसक्छ उनीमाथि कुनैं चलचित्रको प्रभाव परेको होस् । युवकले गरेका कामका कारण उनको चर्चा समाचारपत्रसम्म पुग्यो, जसले होर्डिङ बोर्ड देखेका थिएनन्, जो त्यस शहर वा राज्यका बासिन्दा पनि थिएनन् ।
उनीहरुले पनि सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट यो खबर थाहा पाए । अब प्रहरीले ती युवकसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । ती युवतीले युवकलाई माफी दिइन् वा दिइनन् त थाहा छैन तर माफी माग्ने तरिकाका बारेमा भने बहस सुरु भएको छ । एजेन्सी